Kordhinta gadhka buufin dabiici dabiici ah Label Garka Ragga Grow Serum for koraya Gadhka dheer oo xoog leh
Maxaad u dooratay buufinta timaha? Qof kastaa wuu ogyahay in manjo dheer, xoog badan, iyo nacasnimo ay tahay shay xaasid u ah qof kasta oo halkaa jooga. Su’aasha kaliya ayaa ah “mid ma kori kartaa?” Mudane kasta oo garka xiiran wuxuu ogyahay in gadhka xoqan iyo xoqida uusan aheyn wado lagu ilaaliyo mankaaga. Badeecadani waxay ku xallisaa dhibaatadaas iyadoo gacan ka geysaneysa la dagaallanka kuwa dhibcaha bidaarta leh ee garkaaga ku jira, iyagoo sii wadaya koritaanka timahaaga xoog iyo xitaa. Waa maxay buufinta timaha ee karti u leh? Buufinta Garka waa geedo ...
Clear Dibno dhalaalaya Qoyaanka Dhirta Dibno Cuno Qurxinta Qurxinta Dibno Dheeraad Ah Oo Dambeysa Saliid Dibno dufan leh oo bushimaha
Maxaad Ugu Baahan Tahay Bishigeena Dhuumashada Dhaldhalaalka Gloss moisturizing Liip Oil? Maxaad u Dooranaysaa Saliiddeena Dambe ee Dhaldhalaalaya Dhaldhalaalka dhalaalaya. Waa kuwan sababaha qaarkood: 1. SIR BADAN OO BUUXA - Bishbaashiyaha faruuryuhu waxay bushimahaaga ka dhigayaan kuwo qoyaan ah oo isku mar kor u buuqaya, saliidda bushimaheennu waxay kordhisaa mugga dibnaha iyadoo ka soo jiideysa qoyaanka deegaanka iyo inay ka ilaaliso biyaha inay uumi baxaan maqaarka, iyagoo ku siinaya adiga qoyaan galmo leh. fiiri dhejis aan dhegdheg lahayn. 2. MUDDADA KOOXDA AH: Nuuraddan kareemka ah waxaa loo sameeyay si loo qoyo oo loo dejiyo ...
Astaanta Astaanta Matte lipgloss Muddo Dheeraad ah 40 midab Dibnaha Midab Masawir Sare Leh Liibaanta Liquid Biyo Mareenka
Waa maxay ? Lipgloss-kani wuxuu bushimahaaga siinayaa buuxa, mid dareen leh oo ka buuxo jirrabaadda. lagu qaabeeyey raaxo, run dhammaystiran oo matte ah, oo jilicsan sida xariirta. Tayo sare, Cabir la qaadan karo, si fudud loo qaadi karo. Ku habboon isticmaalka xirfadeed ama isticmaalka guriga. Macno malahan midabka uu qalbigaagu doonayo waxaad had iyo jeer u muuqan doontaa sifiican dhamaadka ciyaarta. Dareenku waa jilicsan yahay oo siman yahay, iyo maqaarka dusha sare waa sahlan tahay in la abuuro qurxiyo bushimaha quruxsan Midab buuxa, midab hodan ah, muujinta midabka sare. Waxay leedahay biyo-celin wanaagsan iyo ...
Label birta birta ah Shimmer Lipgloss Vegan Cosmetics Waterproof 17 Color bling Make Up Diamond Matte Glitter Liquid lipstick
Waa maxay ? Midabbada lipstick-ga dhalaalaya, waxay ku siinayaan faruur dhalaalaya & dhalaalaya, midab badan ayaa daboolaya baahida isticmaalkaaga maalinlaha ah. Xullo qaab toosan ama midabyo isku dhafan si aad qurxintaadu ugu ekaato mid hagaagsan. Hadiyad kaamil ah oo loogu talagalay Gabdhaha – Iyada oo xirmo gaar ah leh, waa hadiyado wanaagsan oo loogu talagalay gabdhaha ama marwooyinka xafladda dhalashada, Bandhigga Qurxinta, Xafladda Qoob ka ciyaarka iyo Arooska Qurxinta Arooska. maalin kasta, oo baro dumarka sida loo noqdo gabdho quruxsan oo wasmo leh. Astaamaha: 1.Lipstick Liquid Midabkeedu Yahay – Mid dhalaalaya ...
Isukeenista Timaha Ragga Jumlada ah Buufinta Foormulaa Dhirta Waxtar Waxtarka Timaha Timaha loogu talagalay Iskuduwaha Timaha Aagga Bidaarta leh
Maxaad u dooratay buufinta timaha? In timo laga waayo qayb kasta oo jidhkaaga ka mid ah ayaa noqon karta mid walaac leh, ha noqoto lumis lama filaan ah ama lumis waqti ka dib socda. Timo luminta (alopecia) waxay saameyn ku yeelan kartaa kaliya madaxaaga ama jirkaaga oo dhan, waxayna noqon kartaa ku meel gaar ama joogto ah. Waxay noqon kartaa natiijada dhaxalka, isbeddelada hoormoonka, xaaladaha caafimaad ama qayb caadi ah oo gabow ah. Qof kastaa wuu ku waayi karaa timaha madaxiisa, laakiin waxay ku badan tahay ragga. Baqdintu caadi ahaan waxaa loola jeedaa timo xad dhaaf ah oo ka yimaada madaxaaga. Timaha dhaxalka los ...